दाँत र गिजाका सफाइ किन ? – Health Post Nepal
२०७६ पुष ५ गते १३:०५
दाँतहरु फोहर भएमा गिजाहरुको संक्रमण प्रारम्भ हुन्छ र गिजा सुनिन्छ । गिजाको रंग गुलाफी नभई रातो हुनु दाँतको बीचको गिजाको अंश बाटुलो हुनु, सास दुर्गन्धित वा मुखको स्नायु बिग्रनु, थिच्दा वा अडकेको टुक्रा भिक्दा गिजाबाट रगत आउने हुन्छ । यसमा नून पानीले कुल्ला गर्ने,ताजा फलफूल र खास गरेर भिटामिन सी खाने, गिजाको छेउछाउ दाँतको सफाई गर्नुपर्दछ । हाइड्र«ोजन पेरोक्साइड भएमा उत्तम हुन्छ । धुम्रपान बन्द गनर्ने तथा पान सुपारी नखाने तथा ब्रसको प्रयोग गर्ने । दही, चाट, मिठाई सेवन नगर्ने ।
दाँत भिकेपछिको समस्या
३. रगत आउने
दाँत झिकेपछि भएको खाल्डो सुनिएको छ भने अवश्य नै दुख्छ । एनेल्जिेसिक खानुपर्छ । संक्रमण शुरुमा तीब्र प्रकारको दुखाई हुन्छ । यसमा दाँत डे««सिङ गर्नुपर्छ र प्रत्येक दिन बदल्नु पर्छ । जहिले पनि दाँत निकाल्नु भन्दा पहिले मधुमेह र रक्तचापको परीक्षण गरेर मात्र दाँत उखेल्नु पर्छ । रगत आउन बन्द नभएमा अन्य कारणको खोजी गर्नु पर्छ ।
थुक ग्रन्थि संक्रमण
युक ग्रन्थ्रिमा थुक बन्दछ । यहाँ संक्रमण भएमा अनुहार सुनिन्छ र त्यो ठाउँमा दुख्छ । खाना देख्ने बित्तिकै, खानाको गन्ध पाउँदा र भोक लाग्दा दुखाई बढी हुनु । थुक ग्रन्थिको ठाउँ सुनिन तथा मुख रातो हुन्छ ।
संक्रमण र सुनिएको ठाउँलाई उपचार गर्ने र एण्टीबायोटिक र एनेल्जेसिक दिने तथा ताताले सेक्ने र नरम पदार्थ दिने । मुखमा,च्यापुमा वा अनुहारमा सुनिने गाँठा गठी भएमा एक कोर्ष ७–१० दिन एण्टिबायोटिक र एनेल्जेसिक खाँदा पनि ठिक नभएमा ट्युमर हुन सक्छ । त्यसैले बढीसमय औषधिमा खेर नफाली शल्यक्रियातिर सोचाइ गर्नुपर्छ ।
स्केलिङ्ग ( दाँत सफा गर्न )
स्केलिङ्ग भनेको दाँत खुर्कनु हो । पुरानो खाना, प्लाकलाई पनि स्केलिङ्ग टार्टर सफा गर्न सकिन्छ । दाँत माथि जिवाणुको पत्र कडा भएर टार्टर बन्छ । सफा दाँत भएपछि गिजा स्वस्थ्य रहन्छ । एक पटक स्केलिङ गरेर राम्रोसंग सफा नगरेमा पुन टार्टर बन्छ । पुन संक्रमण शुरु हुन्छ । केहि चिज दाँतमा अड्कने बित्तिकै निकाल्नु पर्छ । गिजाको रोग भएमा उक्त रोग निको पारेपछि मात्र स्केलिङ्ग गर्नुपर्छ । दाँत सफा गर्ने औजारलाई स्केलर भन्छन् । सजिलोसँग दाँत सफा गर्न विभिन्न किसिमका विभिन्न आकार– प्रकारका स्केलर्स गरिन्छ । स्केलर्स १. दुवैपट्टि तीखा टुप्पा भएको २. दुबैपट्टि मोटो र गोलो । स्केलर्सलाई धार लगाएर राख्नुपर्छ । बाटुलोभन्दा टुप्पा धारिलो स्केलर्स सजिलोसँग टार्टर सफा गर्न सकिन्छ ।